Fianarantsoa : Ambondrona Tour
samedi, 06 mai 2017 19:44
Hanao fampisehoana ao amin'ny kianja mitafo ao Ambatomena ny tarika Ambondrona ny alahady 7 mey amin'ity fandalovany eto Fianarantsoa ity.
Toerana tantanin'ny TAFITA (Tahiry fanohanana ny Tanora) io Gymnase nantokana ho an'ny hetsika ara-panatanjahatena io. Ka sambany izao vao tena hisy fampisehoana goavana toa ny an'ny tarika Ambondrona tahaka izao.
Hatramin'izay ihany koa dia Kianjan'ny frera sy masera, isan'izay malalaka eto Fianarantsoa, no nanatontosana ny fiakarana an-tsehatry ny tarika Ambondrona. Eto dia hita mitombo lanja fampisehoana noho izy tanterahina ao amin'io toerana goavana mahazaka mpijery amin'ny isa mankadiry io.
Nandalo teto Fianarantsoa hatrany ny tarika Ambondrona isan-taona, ka tao amin'ny Ballroom Soafia no nanatanterahana ny Cabaret ny alin'ny zoma 5 mey. Tonga nanatrika izany hatrany ireo mpanakafy eto an-toerana.